​खनारको एक उद्योगमा आगलागी, नियन्त्रणको प्रयास जारी
​बसभित्र यात्रु बेहोस, होस खुल्दा पर्सभित्रको पैसा गायब
टप १२ बाट बाहिरिएपनि मिस वल्र्डमा नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता
‘रियालिटी शोमा संगीतको सही जजमेन्ट भइरहेको छैन’ : कर्णदास
​डीभीएम स्कुलपछि इटहरीका मेयरको नजर बालग्रामसँगैको जग्गामा
​इटहरीको मनि ट्रान्सफर लुट्ने राजन नामुद डाका, यस्तो छ अपराधको सुची
के तपाईँ दैनिक टाउको दुखाईले चिन्तित हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस्
प्रायः सबै मानिसलाई टाउको दुख्ने गर्दछ । यसका विभिन्न कारण छन्, जस्तै आँखाको समस्या, अपच, कब्जियत, लू, अनियमित मासिक धर्म, ज्वरो, चिन्ता, मानसिक तनाव, अनिन्द्रा ।
यस्तो अवस्थामा धेरै मनिसले पेनकिलरको प्रयोग गर्छन् । त्यसले झन् रियाक्सन गर्न सक्छ । त्यसैले टाउको दुखाईबाट पिडित....
चिन्ता लिनु कत्तिको खतरनाक ?
चिन्ताले थुप्रै शारीरिक तथा मानसिक रोगलाई जन्म दिने भएकाले मानव स्वास्थ्यका लागि यो घातक मानिन्छ ।
चिन्ता र तनाव लिने व्यक्तिमा....
तुलसी मानव जीवनको निम्ती अत्यान्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ । तुलसी बिना साइट इफेक्ट जस्तोसुकै रोगका लागि प्रभावकारी काम गर्ने औषधिय गुण मानिन्छ ।
आर्युवेदमा बहुउपयोगी बनस्पती हो तुलसी । तुलसीले वायुमण्डलमा वहने दुषित हावालाई समेत शुद्धिकरण गर्छ । त्यसैले जो कोहिले घर आँगन, बार्दली, छतमा....
ट्वाइलेट सिटमा भन्दा प्लाष्टिकको बोतलमा धेरै किटाणु
ट्वाइलेट सीटभन्दा बारम्बार पानी पिउनका लागि प्रयोग गर्ने प्लाष्टिक बोतलमा बढि किटाणु हुने एक नयाँ अनुसन्धानले बताएको छ ।
ट्रेडमिल रिभ्यूद्वारा गराइएको एक नयाँ अध्ययनका अनुसार ती किटाणुले रोग निम्त्याउने गरेको छ । अध्ययनको नतिजालाई विश्वास गर्ने हो भने बोतलमा पाइने किटाणुमध्ये ६० प्रतिशत....
तामाको भाँडामा राखिएको पानी पिउँदा फाइदै फाइदा
१. तामाको भाँडामा पानी राख्नाले तामा बिस्तारै पानीमा मिसिएर सकारात्मक गुण प्रदान गर्छ । यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको यसमा राखिएको पानी कहिल्यै पनि बेस्वादको हुँदैंन । त्यसैले लामो समयसम्म तामाको भाँडामा पानी राख्न सकिन्छ ।
२. आयुर्वेदका अनुसार तामाको भाँडामा राखिएको पानी खानाले....
यस्तो आलु खानु खतरनाक
विश्वभर नै आलुको बढी प्रयोग हुने गरेको छ । अझ नेपाल र भारत लगायतको देशमा त यसको उत्पादन तथा उपभोग बढी हुने गरेको छ । आलूलाई भण्डारण गरेर राख्ने गरिएको छ र यसलाई आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने गरिएको छ । तर यसरी भण्डारण गरिएको आलु....
गर्मीमा एयर कन्डिशनर खतर्नाक, कसरी जोगिने ?
गर्मी मौसममा सीतलका लागि पङ्खा, कुलर, एयर कन्डिशनर जस्ता उपकरणको प्रयोग गर्ने चलन छ । यी उपकरण मार्फत आफ्नो आवश्यकता अनुसार उपयुक्त तापमान कायम राख्न सकिन्छ । यस्ता उपकरणले गर्मीमा सीतल्ता प्रदान त गर्छ तर स्वास्थ्यका लागि भने हानिकारक हुन्छ । निरन्तर लामो समय एसीमा....
‘बिजुली तेल’ घातक
काठमाडौं । धेरै नेपालीहरुले बाथ, जोर्नी दुखेको, आगोले पोलेको, ढाड दुखेको, टाउको दुखेको हातखुट्टा काटेको ठाउँमा मालिस गर्न बिजुलीको तेल प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर यस्तो तेल निकै घातक रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
बिजुलीको तेलको प्रयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।....
खाली पेटमा कागती पानी खानुको फाइदा
बिहान उठुने बितिकै प्रायः मानिसहरु चिया पिउने गर्छन् । तर, खाली पेटमा तातो चिया पिउनु लाभदायक मानिँदैन । मन तातो पानीमा कागती मिसाएर पिउनु निकै लाभदायक मानिन्छ । खाली पेटमा तातो पानीमा कगती मिसाएर खानुका फाइदा यस्ता छन्ः
१. खाली पेटमा कागती पानी पिउनाले....
दिउँसो सुत्नु फाइदा कि बेफाइदा ?
शास्त्रमा दिनमा सुत्नु राम्रो मानिदैन । दिउँसो सुत्दा पाचनतन्त्रमा गडबडी हुन्छ र खाना सही तरिकाले पच्दैन । यसले गर्दा कब्जियत, ग्यास, अपच लगायत समस्या आइलाग्नुका साथै मोटोपन पनि बढ्छ । दिउँसो एकछिन आराम गर्दा त कुनै हानि हुँदैन तर खाना खाएर गहिरो निद्रामा जाँदा चाहिँ....
पाँचथरमा फेल पर्यो बन्दुक बनाउने कारखाना, बन्दुकको पार्टपुर्जा सहित एकजना पक्राउ
एन्फाले सार्वजनिक गर्यो गोल्डकप तालिका, इटहरीमा माघ ११, धरानमा २६ गतेदेखि
​मालिकसँग कुकुरको बदला, नौ दिन सम्म हिँडेर टोक्यो मालिकलाई
​झपामा जंगली हात्तीले घर भत्कायो
मष्तिस्कले ठुलो स्वरको प्रतिक्रिया चाँडो दिन्छ ?
गाँजा सहित कतार उड्न लागेका मोरङका युवा विमानस्थलबाट पक्राउ
विजया प्याकुरेल (९८१९०६३६२९, ९८४२५०३७००)